I-Manualidades On yiwebhusayithi ezinikele kwihlabathi le-DIY apho sicebisa ukuba uninzi lwezinto zokuhombisa kunye nezentsusa ozenzele zona. Ukukunceda, iqela lewebhu lenziwe ngabantu abanomdla abafuna ukwabelana ngamava abo kunye nezakhono kwihlabathi lezobugcisa.
El Iqela lokuhlela lezobugcisa Yenziwe ngababhali abalandelayo kodwa ukuba ufuna ukuba yinxalenye yayo, ungathandabuzi sibhale ngale fomu ilandelayo:
Ukusukela ukuba ndiyakhumbula ndikuthandile ukudala ngezandla zam: ukubhala, ukupeyinta, ukwenza imisebenzi yezandla ... ndifunde imbali yezobugcisa, ukubuyisela kunye nolondolozo kwaye ngoku ndijolise kwilizwe lokufundisa. Kodwa ngexesha lam elisecaleni ndiyakuthanda ukudala kwaye ngoku ndiyakwazi ukwabelana nabanye bendalo.
Ndingumthandi omkhulu wobuchule kunye nemisebenzi yezandla ukusukela ebuntwaneni bam. Ngokubhekisele kwinto endiyithandayo, kufuneka nditsho ukuba ndithembekile ngokungagungqiyo khekhe kunye nokufota, kodwa ndinomdla wokufundisa zonke izakhono zam kubantwana nakubantu abadala. Kuyachulumancisa ukukwazi ukwenza izinto ezininzi ezinokwenziwa ngezandla zethu kwaye ubone ukuba kude kangakanani ukuya kuthi ga kubuchule bethu.
Ndiyile ngendalo, ndithanda yonke into eyenziwe ngesandla kwaye ndinomdla wokurisayikilisha. Ndiyakuthanda ukunika ubomi besibini kuyo nayiphi na into, ukuyila kunye nokwenza yonke into onokuyicinga ngezandla zam. Kwaye ngaphezulu kwayo yonke into, funda ukuphinda uyisebenzise njengobuninzi bobomi. Imotto yam, ukuba ayisasebenzi kuwe, yisebenzise kwakhona.
Akukho nto inika ulwaneliseko ngaphezu kokubona ubugcisa bakho obugqityiweyo. Yinto yokuzonwabisa ehlekisayo neyilayo. Jonga ukuhlanganiswa kwam kwaye uqale ukuziqhelanisa nezakhono zakho. Uya kuvuya!
Igama lam ndinguMarian, ndafunda ukuhombisa kunye noyilo lwangaphakathi. Ndingumntu okhutheleyo othanda ukudala ngezandla zam: ukupeyinta, ukunamathisela, ukuthunga ... bendihlala ndizithanda izinto zobugcisa kwaye ngoku ndibelana ngazo nawe.
Isidanga seMbali yoMculo kunye neeSayensi, utitshala wekatala wamandulo kunye nesidanga sokufundisa ngemfundo yoMculo. Ukusukela ebuncinci bendinomdla wezobugcisa. Umbala yenye yeencwadana zam zesazisi. Ndenza izifundo kwi-intanethi ukuze abantu abaninzi babelane ngomnqweno wabo wokudala kunye nam.
Umbhali, umhleli kunye nobugcisa bebhlog kunye nesiteshi seYouTube "El Taller de Ire", esenza umxholo malunga ne-DIY, ubugcisa kunye nemisebenzi yobugcisa. Ukugxininisa kwimizobo yokuhombisa, ukwenza iimveliso zobugcisa ngale ndlela yeevenkile zokuhombisa, kunye nodongwe lwepolymer kunye nentlama eguqukayo, ukuyila nokusebenza ngaphezulu kweminyaka emi-2 yokuGxuma udongwe.
Ndihlala ndizithanda izinto zobugcisa njengoko ndizibona njengomntu oyilayo. Kuyandonwabisa ukuba ngezixhobo ezimbalwa unokwenza izinto ezinkulu.
Ukusuka eRosario, eArgentina, ndaqala phantse ngengozi ukuvelisa umxholo wewebhu ngelixa bendilandela isidanga sam somthetho. Ndiyayithanda imisebenzi yezandla ndisemncinci kakhulu, kwaye ndihlala ndibanika ubomi besibini kwinto eza kulahlwa.
Ndingumntu onamandla, osebenzayo kwaye oguqukayo. Ndiyathanda ukubhala kwaye ndenze igalelo kwindalo yam kwiBhlog, kuba ngale ndlela, ndiyabelana nabo njengam abanobudlelwane bezobugcisa.
Ukudala kuyindalo, kwaye ukucinga kusenza siyile. Ndiyathemba ukuba indalo yam ikunika izimvo kunye nezinto ozichukumisayo ukuze wenze ubomi bakho babobakho. Kungenxa yokuba ukuba sisekhayeni lethu, sinethemba lokubona ukubonakaliswa kwento esiyiyo.